Magro Behoririka : tsy afa-miala amin’ny famahana ny krizy ny fahatongavan’i Dada – MyDago.com aime Madagascar
Magro Behoririka : tsy afa-miala amin’ny famahana ny krizy ny fahatongavan’i Dada
Mijanona hatrany etsy amin’ny Magro Behoririka ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Androany dia nisy ny lahateny maro samihafa nataon’ireo mpitarika ny tolona teny an-toerana. Ny solontenan’ny tanora TIM faritra Analamanga dia namaly ilay zokilahy mipetraka eny Andravoahangy, izay nilaza fa ny fifidianana ihany no vahaolana.Tsy misy fifidianana izany eto hoy izy, raha tsy milamina aloha ny lafiny politika. Izahay tsy matahotra izany fifidianana izany, satria ny Ankolafy Ravalomanana dia manana olomboafidy maro manerana ny Nosy. Nilaza ny solontenan’ny tanora TIM fa tsy mila fifidianana karakarain’ny Tgv izany. Mazava ny fifanarahana hoy izy fa ampodio ny filoha Ravalomanana, fa izahay vonona hisendra ny zavamisy rehetra. Matoa izahay nitolona telo taona teto dia namela mamy ny Filoha Ravalomanana. Ny depiote teo aloha voafidy tany Ambatolampy Mamisoa kosa dia nilaza fa maro izay milaza fa mpitolona mafana fo zanak’idada fa taty aoriana dia nivadika toa dry Raharinaivo, fa isika teto foana. Lasa koa ry Yves Aime fa isika nijanona teto. Namafisiny fa efa akaiky ny fahatongavan’idada, fa telo taona aza vitantsikaka vao maika ao anatin’ny andro vitsivitsy. Tsy afa miala amin’ny famahana ny krizy ny fahatongavan’ny Ravalomanana eto. Nitondra fankaherezana ho an’ny vahoaka ihany koa ny tenany. Ny mpikambana ao amin’ny filankevitry ny tetezamita Leriva Manahirana dia nitodika tamin’ny mpiaramitolona. Amboary hoy izy ny fo mba tsy hibotsibotsina fahatany, mba tsy hitrifatrifana fahatany. Ny zanak’idada dia olona milamintsaina, olona tsy tia ady ary tsy tezitezitra foana. Raha mbola manana izany isika dia ialao izany, fa mila fiovam-po vaovao izao. Nitodika tamin’ny Societé civil ihany koa ny tenany. Izahay dia manitrikitrika fa tomponandraikitra amin’ny korontana vaovao hiseho eto ianareo raha tena hanao Amboletra fifidianana. Ho an’ny CENIT dia hentitra Leriva nilaza fa mba manaova fitsidiham-paritra ianareo fa ny lisim-pifidianana dia tsy misy mandeha amin’ny laoniny. Be dia be ny olona tsy ao anaty lisitra any amin’ny faritra. Izay ve hoy izy no hihazakazahana hanaovana fifidianana. Tomponandraikitra amin’ny korontana vaovao hiseho ihany koa ianareo raha tsy mandinika tsara. Namafisin’ity olomboatendry ity ihany koa fa ny Ankolafy Ravalomanana dia tsy matahotra fifidianana, fa raha mbola mikorontana eto, ka mitohy hazalambo ataon-dRajoelina dia tsy misy izany.Na tianareo na tsy tianareo hoy izy, rehefa tsy alaminareo ny politika dia tsy maintsy aongan’ ny olona izay eo.
Auteur Solo Razafy*Publié le 24 mai 2012 25 mai 2012 Catégories Politique
16 réflexions sur « Magro Behoririka : tsy afa-miala amin’ny famahana ny krizy ny fahatongavan’i Dada »
Tena ilaina sy voalohany ny famerenana an’i Dada.izany hoe ny article 20. fa tosa hadinon’ny sahady ny article 16, 17, sy 19.marihina fa mbola mikatona ny Radio sy tele, mbola migadra ny mpanohitra.
Ny kabary eny an-kianja anefa toa kabary manilika. manilika ny V.O.T, manilika ny VAMI sns… nefa ny ankolafy telo aza vita ihany nefa ny fierahana dia tena tsy mitovy.
Lamaody koa izao ny Manilika ny mpanohitra ny FAT, Fa tena mahavita tena ve ireo mpitarika e ?
Fahendrena koa anefa ny mitsndrina satria ireo mpanohina ny Free FM dis tsy mitaky ny fiverenan’i Ravalo. Noho izany tokony hiasa sy hifanatona ny mpitarika dia miresaka any ambadika na hafana aza ny resaka . Mila firaisan-kiana izao fa izay no tena aretin’ny Malagasy. Misy anefa ny fetrany . Rehefa manohitra ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana dia tsy ilaina. marihiko tsara ilay teny hoe MANOHITRA, misy mantsy tsy manohitra an’izany fa tsy mitady an’izany koa.
Hiangaviana ny mpitarika hifanantona @ ireo hery hafa manohitra an-dRajoelina mba samy tsy hifamely intsony fa tanjona iray no henjehina: Mandrodana ny FAT. Isika zanak’i dada kosa mamerina an-dRavalo.
24 mai 2012 à 19 h 26 min
Ianareo ao amin’ny mouvance Ravalomanana dia tsy manana stratégie akory. Manasa ny lohan’ny olona fotsiny no atao sisa. Misy occasions be dia be azo nanaovana actions nefa tsy arak’izay ny zava-misy. Mampalahelo fa lasa ny injustice indray no mi-dominer. Ny an-dry zareo ao amin’ny HAT, voalohany ny structures izy efa manana: ny sasany miandraikitra ny communication, ny sasany miandraikitra ny stratégie, ny sasany manao actions hafa dia hita fa misy ilay « SYNERGIE » eo amin-dry zareo (amin’ny ratsy, kanefa mirindra). Ohatran’ny jeux d’echecs io e. Manao action ny iray dia mihetsika ny pièces-nao hanoherana an’iny. Ny zavatra hita amin’izao anefa dia manao action iray ny ekipan-dRajoelina dia mangina tsy miteny ny ao amin’ny mouvance Ravalo. Raha izao no mitohy dia manampoiza sahady fa ho ringana ny aminareo. Manao fanambarana, ohatra, ny SADEC en faveur ny mpitondra dia mangina ny Ekipan-dRavalo. F’agaha tsy mba afaka ny manao fanambarana miaraka manohitra sy mamaky bantsilana ny SADEC momba ny impartialité ataony.Ianareo manana olona ao amin’ny fitondrana ary zonareo izany nefa tsy ataonareo. Tsy mahagaga raha tsy miraharaha anareo intsony na ny SADEC na ny Communauté internationnale atsy ho atsy satria: « manaiky matoa tsy miteny ». Kely hery sy tsy maha-ovoka ianareo eo anatrehan’ireo. Raha leaders marina ianareo mpitarika dia tokony hanana stratégie ary mifampizara andraikitra (IZA no manao INONA?).Toro-hevitra amin’ny maha-olo-tsotra ahy izany fa rehefa tsy mety moa dia aleo ho ahy ny ahy. Mba mihetsika e. ‘Nareo manana olona afaka manao zavatra dia mba atao tanjona ny hisian’ny « Synergie d’actions ». Izao aloha dia very points be dia be izany mouvance RAVALO izany. Ny an’ny HAT mandroso ny pions-ny foana izy, ianareo mangina. Dia ho taraiky eo koa! Matoa ianareo mbola mitana telo taona aty aoriana dia manana FORCE izany ianareo NEFA tsy ampiasainareo ilay izy. Izaho tsy manao hoe manaova herisetra, tsy any. Manàna vision hitondrana ny tolona raha mbola hitolona fa reraka kosa ny vahoaka e.
Manoana ny hevitrao koa aho ry Lazalazao, toa misy zavatra KONIKONENINA ve sa?????
Ny ahiako mantsy dia raha ahaomby ny hetsik’ireto farany dia ho hailiky ny olona eo isika,
ary tsy hanaiky ireo nitolona Nanafaka an’i domelina ka ho tantara ratsy vao2 indray????ny mety hitranga koa dia sao
mba efa tOKONY HO TOANANA @’izay ireo olona fa efa mahasahy MITRAOTRA fa mazava ho azy fa mifampiresaka
araka ny voalazanao ry Lazalazao atao izay marimaritra HIRAISANA fa ny tanjona dia iray aloha, » hanilika ny FOZA ».
24 mai 2012 à 19 h 32 min
Misaotra ry Hery!!misy ho tsakotsakoina izao ary mino aho fa voapita ny hafatra,
aoka isika handray andraikitra e!!tsy miandry mahazo fotsiny!!NDAO!NDAO!!!!!!
24 mai 2012 à 20 h 21 min
Ny probleme anie io niditra ny systeme io dia be no tsy te hihetsika firy. Firy firy moa ny membre ny cst sy ct ao Mouvance Ravalomanana tsy olona nitolona akory,c est a dire tsy tena manana conviction akory fa tafiditra ao dia ny hifikitra ao seza no tena tanjona..Tsy misy strategie ao satria ny ankamaroany na miverina i dada na tsy miverina rehefa mahazo seza izy dia izay dia ampy, eo izy mody misabakabaka eo aloha…tsy misy strategie ao satria tsy misy solidarite mihintsy, na te hanao zavatra aza ny sasany dia ny sasany mifreiner la machine..Raha tena nisy conviction sy volonte pour le retour de ravalomanana teo, ahoana moa to tsy afaka niray hampiatra strategie hiombonana, ahoana moa no mbola nekena foana izay tsy mety rehetra nataony HAT ..Ahoana moa no tsy hahafahany mi elaborer strategie comme dit Hery etsy ambony raha tena te hanao zavatra, misy olona intelligent sy nianatra tsara ao…Ny volonte no tsy misy satria te hanaraka fotsiny izay tafavoaka eo na i Dada na ny Hat. inona moa izao no mahafatifaty fa tsy efa manao ny demenbrement ny cenit no atao nefa ny objectif tokony ho tratrarina mbola tsy vita…efa mi preparer ny cenit @ izay raha tsy tafaverina President efa pret ny mpisabaka, hanao fifidianana miaraka @ foza…ny probleme koa rehefa mi denoncer ny zavatra tsy mety ao Mouvance dia lazaina fa mpanenjika foana, izany akory tsy manala ny hoe misy olona tena sincere ao te hnao zavatra fa tena misy koa ireo mampiresaka fotsiny…Ary na ny sadc sy communaute internationale aza tsy manisy respect satria tsy mijoro fa mora hozogonzonona. Ny vahoaka maro mbola mitady ny retour ny president Ravalomana no mbola hialokalofany sasany ao fa raha tsy izany efa betsako no nibata ny sezany hanakaiky kokoa ny foza..
LE SOLEIL SE LEVE…!
J’ai fait remarquer quelque part que toutes les raisons de blocage du processus de mise en oeuvre de la feuille de route ont été levées le 14 mai 2012 ,veille de la défaite de sarkozy…
La SADC jusque là prudente ou réticente a gardé un silence diplomatique que Nous ne pouvons ni comprendre ni admettre ,…s’est soudainement manifestée et a pris la décision d’éxiger de façon énergique aux parties signataires de la feuille de route d’appliquer rapidement tous les articles de la feuille de route afin de parvenir au retour de l’ordre er de la sécurité publics..
Pour Nous , cette éxigence de la SADC va entrainer :
…l’élargissement des prisonniers politiques sous peu
…la reprise des émissions des antennes radio-TV
…s’est entretenue avec avec la mouvance RAVALOMANANA MARC pour convenir de la date du retour du Président RAVALOMANANA MARC : à la fin du mois de mai 2012 , le retour est prévu..
Nous percevons que tout s’accélère et Nous constatons même que même le pm ose prendre les initiatives qu’il aurait dû prendre dès sa nomination mais il a accepté pour convenance personnelle ou par peur la prééminence de rajoelina et les cous de p de tête de sa ministre de la justice :il est à l’origine de la cessation d’utilisation des bombes lacrymogènes depuis hier..
rajoelina ,dans la nasse ,a tenté d’user de l’autorité du secrétaire général des Nations -Unies pour sauver sa situation indéfendable , de même aurait plaidé son cas devant les autorités françaises ,qui lui ont signifié que désormais elles s’alignent sur la décision de la SADC…
Et ce 24 mai courant rajoelina s’est envolé à ANGOLA pour essayer d ‘amadouer le Président de l’ANGOLA qui est aussi le Président en exercice de la SADC…
En plus , pour comble de malheur pour ce pouvoir de facto l’OACI mène dans nos murs des opérations de perquisition concernant le fonctionnement ,les activités de l’ACM…
Les putchistes sont en perdition et leur affolement ,leur impuissance démontrent bien qu’ils ont été utilisés par la mafia coloniale française pour commettre le coup d’état ,pour détruire le tissu économique agro-alimentaire en détruisant les usines et magasins TIKO et MAGRO..pour que la Population Malgache subisse les affres
de la pauvreté et surtout les difficultés sociales (chômage , déscolarisation , sans domicile, sans pouvoir trouver à manger..etc)..
Oui Nous Malgaches Nous Nous satisfaisons d ‘accabler rajoelina ,qui je trouve a été bien traité par Nous Malgaches..Il n’a pas suffit de dénoncer durant les trois ans ses méfaits et sa désinvolture..
De notre part ,il aurait dû recevoir la grande correction que mérite ce coup d’état du 17 mars 2009..
Il y a en Nous quelque chose de très lâche , de très individualiste ,de mauvaise foi oui quelque chose qui permet et facilite et même favorise ou encourage les aventures et les vengeances de ceux qui , soutenus par la françafrique , n’ont pas digéré les défaites électorales et se sont vengés lâchement en se servant de la vanité de rajoelina pour poursuivre leur néocolonialisme , comme ils se sont comportés vis-à-vis du Générral RAMANTSOA GABRIEL qu’ils ont voulu évincer du Pouvoir que les Malgaches lui ont confié par référendum en se servant de la légèreté de tsimandrava..
Mais en 2009 ,ils ces revanchards se sont heurtés contre la ruse du Président RAVALOMANANA MARC ,qui a pris la précaution intelligemment d’associer la République de Madagascar avec la SADC..!
OUI NOTRE APPARTENANCE A LA SADC COMME MEMBRE A PART ENTIERE
NOUS A PROTEGE CONTRE L’AGRESSION DE LA MAFIA COLONIALE…!
telo taona aza vita!
kely sisa ,efa telo taona izay .
ka asio telo taona indray.
Tena ny Filohan’ny Sadc mihitsy ankehitriny no nandray an’i Andry kely mahavita azy! Tena fandraisana tsy nisy toy izany no nandraisana ity Boay kely matsilo saina sa mpitondra mahay ity! Angola iray vohitra no niara-nientana tamin’ingahy Eduardo Santos tamin’ny fandraisana azy! Ny zavatra notsipihan’ny roa tonta dia ny hoe efa tena ami’ny ilàna azy ankehitriny ny fampiharana ny Tondrozotra. Fa ny zavatra tena nahafaly ny maro dia ny nanambaran’ny Filoha Angoley fa ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana dia hosakanana tsy handia an’i Madagascar aloha mandritra ny 12 taona, satria araka ny toro-marik’ireo solontenan’ny Sadc avy eto Madagascar dia izy tokoa kay no tena fototry ny olana. Mananntsafidy izy nefa hoy ingahy Santos nanohy ny teniny: na izy hiatrika ny ny Fitsarana malagasy izay manana ny fahaleovantenany, na izy hijanonana ao Afrika Atsimo. Raha ny hita tamin’y Video moa dia tena nahafinaritra tokoa ny fihaonan’ny roa tonta, ary tena fety be no namaranana ny fihaonana! Merci Andry an! Ho toran-tomany indray zao ny zanak’i dada!
Aza dia mampiteniteny foana Ravelonarivo a!!
Aoka fa tsy te hiteny ratsy aho fa bedin’i Jesoa,
tsy haiko aloha ianao na foza na zanak’i dada fa raha tsy izay dia efa nahazo??aleo mangina aloha!
Ha!ha!ha!!fomba ahoana ??aiza ity fiteny ry tonaka e??avy eo fotsy lazaina mainty moa ny mainty
lazaina fa FOTSY????SADC hono hihaona @ domelina???hita mihintsy hoe: Mpivaro-pika no mba
milaza zavatra, tsy mora ohatry ny mivarotra Pika ity raharaha ry foza a!!Mapmė be fa efa ao izy!!!!
Tena improductif, raha sady : Anti-HAT nefa mamely an’i dada an!
(Omer Beriziky: application de l’article 10)
Quel verdict national ANTIECONOMIQUE affiché : « La machine destructive de la transition a une fois de plus frappé lourdement TIKO.»
Nous préférons mourrir jusqu’à la soif,
que de voir ces PUTSHISTES octroyés de toute forme de financements – aides internationaux!
25 mai 2012 à 9 h 49 min
Handositra ilay jeneraly pandaina-mpandainga ! Tsapany fa tena halan’ny vahoaka i lery ary koa efa miozongozona ny fitondram-paty !
Ho aiza hono izy ry HoAiza ? Hiofana amin’ny fanaovan’inona indray hono izato izy ?
Formation : Spécialité guerre tribale ?
25 mai 2012 à 11 h 29 min
F’angaha hitsaoka hono??efa be koa ny azony koh! sao tratra farany eo!
Dia aleo hihomehezana fotsiny! asaivo manao » Pandalao » aloha izy,
Makanofy ratsy iry izy! ohatry ny tain’omby.
Izany indray no malaza, hoe HANDEHA HIOFANA !!
25 mai 2012 à 11 h 50 min
Hi!hihi!!hiofana hamoritra mafimafy kokoa ???
Mety hiala bala lery fa efa be ny azony sady fantany fa efa miharatsy ny lalao,
olona fatsora lahy iny??teo izy mantsy nanao izay danin’ny kibony mihintsy, dia mbola moramora koa ny asa e!!
25 mai 2012 à 15 h 37 min
TAFIO NY FINOANA SY NY KIRY ARY NY HERY !HALAVIRO IREO BE HATRAITRA !
Efa mivonombonona daholo izany izao !:
…hanongana an-drajoelina ireo sahy ,tsy matahotra toa ireo mpitarika ny ankolafy RAVALOMANANA MARC !Ary dia mba azon’izy ireo hazavaina ve ny manaraka !
Sa izy reo dia samy hizakazaka haka ny Fitondrana samy ho be toika fa samy nanongana an-drajoelina , ka samy miray mitondra ny Firenena !
Amin’ny fomba ahoana ?
Ho fifidianana na ho fanendrena ireo mpitondra no fitsinjarana ny fahefana ?
…indreo fa tonga koa ny VOT , ny Malagasy Miray , ny Firaisan-kina avy amin’ny HMF !
Hanao inona izy ireo ? hanaiky lebenana sa hanara-kefa ?
….toa misy fikambanana iray izay mikasa hamolavola tondrozotra vaovao ,satria o tondro-jotran’ny vahiny ,dia mifanaraka amin’ny fanirian’ny Malagasy !!!
Ireo mivonona handray ny fitndrana ,rehefa voahongana i rajoeina , ia tsy manana programam-pitondrana fa be fihetsika fotsiny , ary mitsiritra ao an-tsainy ny vola ho kiakirainy rehefa eo am-pitantanana ny Firenena izy ireo..
Ary mihevitra ary izy ireo fa rajoelina nahavita koa nahoana izahay ,iika tsy hahavita.
Ny adinony dia tsy i rajoelina no nisaina na nao ny planina nananonganam-panjakana amin’ny 17 mars 2009 ,izay nokarakaraina atrin’ny ela talohan’ny 17 mars 2009..
Koa hiaraha-mahita eo ny fahakingana ,ny fahasahiana , ary ny fahaizan’izy ireo manatsara aingana ny fiainam-bahoaka ary ny fahazahoan’izy ireo ny tso-dranon’ny Communauté internationale..!
Ho tsapan’izy ireo fa mora ny mitsaontsaona fa sarotra ny manefa…!
Tsy kilaolao ny fiainam-pirenena ka atao andrakandrana ary ho vita fotsiny amin’ny kajy am-bava sy ny tetika ambony tamboho !
Ary iza moa no hanaiky fa hanongana an-drajoelina izy ireo ary haka ny fahefana ?Hisy adin’olombitsy telo na efatra hifampitana hisolo toerana an-drajoelina ary ho adin’ny besandry ve sa ho fifandonan’ny be mokon-doha ?
Ny fialana amin’io tarehin-javatra io no antony nisiana’ny fifanarahana nanao ny rafitra mifehy ny olana ary mamehy na mamatotra ny tsirairay hihao-pefy ary hamerina ny fanonganam-panjakana na hampaharitra ny fitondran’ireo nanongana ny fanjakana teo aloha..
Izany no miseho ankehitriny : satria niezaka ny frantsay nandrovitra ny accords de Maputo tamin’ny août 2009 nampiana tovana tany Addis abeba ny novembre 2009 ary narovona ho feuille de route tamin’ny septembre 2011 tany SANDTON..
Io feuille de route nosoniavina tany SANDTON no manery Antsika :
…hanantateraka ny fametrahana ny tetzamita iraisana sy tsy manavaka amin’ny alaln’ny fanantarehana ny andininy rehetra ao anatin’io feuille de route io,
izay midika ho
-famoahana ireo gadra paolitika
-fanokafana sy famelana ireo haino aman-jery no rarana , hanao ny asany (Radio-TV)
-fampodiana ANtanindrazana ny Filoha RAVALOMANANA MARC mianankavy..
ireo no miantoka ny fiverenan’ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna eto amin’ny Firenena ary hafahana mandray indray ireo fanampiana ara-bola sy ara-techniques ny fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy..
TSY AMPY ARY HILAINA NY AFO MOLO SYNY HAITRAITRA HO FANARENANA NY FIRENENA LATSAK’ANDAVAKA !
25 mai 2012 à 16 h 03 min
Somary be daozy ndray ny daina lanin’i denise mpivaro-pika androany zany an!! ary aiza ny namany??? efa mitady hiboridana imasom-bahoaka izy zany!
Précédent Article précédent : Fifidianana anaty sakoroka ?
Suivant Article suivant : Tsy vonona hanatanteraka ny tondrozotra i Beriziky